जीवन सफल बनाउने एउटा कला हो 'अल्छी' !
अल्छी हुनुपनि एउटा कला हो किनभने हामो शरिर र दिमाग पूर्वजका कारण अत्यधिक मेहनत गर्नका लागि प्रोग्राम छ । त्यसकारण कहिलेकाँही अल्छी गरेर ओछ्यानमा सुतिरह्यौं भने समय बर्बाद गरियो भनेर चिन्ता गर्न थाल्छौं । तर विज्ञानले अरु नै भन्छ । विज्ञानका अनुसार अल्छीपन हाम्रो मुटु र दिमागका लागि निकै राम्रो हो । हामी तरिका पुर्याएर अल्छी भयौं भने यसले हामील...
लोकप्रिय जडिबुटी पुदीनाका औषधिजन्य फाइदा
एजेन्सी नेपाली भान्सामा खासगरी अचारको रुपमा प्रयोग गरिने पुदीना लोकप्रिय जडिबुटी हो। यसले खाना पचाउन सहयोग गर्नुका साथै तौल घटाउने, अरुचीबाट मुक्ति दिने, डिप्रेसन तथा थकान घटाउने र टाउको दुखाई हटाउनेलगायतका काम गर्छ। यसका साथै पुदीना दम, स्मरणशक्ति कमजोर भएको र छालाका समस्यामा पनि उपयोगी मानिन्छ। यो श्वासको दुर्गन्ध हटाउने लोकप्रिय माउथ फ...
बहुउपयोगी तोरीको तेलका फाइदा
एजेन्सी तोरीको तेल खासगरी भारत, रोम र ग्रिसमा हजारौं वर्षदेखि लोकप्रिय रहँदै आएको छ । सबैभन्दा पहिले यो ३ हजार बीसीमा भारतमा खेति गरिएको अनुमान गरिएको छ । दार्शनिक हिप्पोक्रेटसले तोरीका दानालाई केही निश्चित खालका औषधि बनाउन प्रयोग गर्थे । रोमनहरुले यसलाई रक्सी बनाउन प्रयोग गर्थे भने ग्रिकका प्रख्यात गणितज्ञ पाइथागोरसले बिच्छीले टोकेको उपचा...
काउन्सिलको परीक्षामा अनुत्तीर्ण संख्या बढेपछि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरबारे चिन्ता
बीबीसी चिकित्सकको रूपमा काम गर्न पाउने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या वर्षेनी बढ्न थालेपछि यसले संवेदनशील मानिने चिकित्सा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विगतमा फेल हुनेहरूको संख्या विदेशमा पढेर आउनेहरूको बढी हुने गरेकोमा अहिले नेपालमै पढ्नेहरूको संख्या पनि बढेको...
गगन थापा र दुर्गा प्रसाईलाई कारबाहीको माग
काठमाडौं, साउन १४ नेपाल स्टुडेन्ट युनियन, बंगलादेशले बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई र पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । उसले प्रसाईमाथि कानूनी कारबाही गर्न माग गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसका नेता थापाले भने माफी माग्नु पर्ने बताएकोे छ । प्रसाईलाई कारवाही नभए र थापाले माफी नमागेसम्म ढाकास्थित...
यसकारण देखिन्छन् डरलाग्दो सपना !
राती कहिलेकाही डरलाग्दो सपना देखेर निन्द्रा खुल्ने गरेको अनुभव अधिकांशसँग हुन्छ । यस्ता डरलाग्दा सपना देखेर तर्सिने पनि गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा त ब्यूझिँदा शरीर पसिना पसिना भइरहेको हुन्छ । डरलाग्दा सपनासँग विभिन्न काल्पनिक कुराहरुलाई जोडेर यसको कारण बताइने गरिन्छ । तर वास्तवमा सुताईको अवस्थाका कारणले यस्तो सपना देख्ने गरिन्छ । एक अध्ययनले सप...
खाली पेटमा किशमिस खानुका पाँच फाईदाहरु ,जानिराखौं
एजेन्सी । किशमिशमा आइरन, पोटाशियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र फाइबरको पार्याप्त मात्रा हुन्छ । यसकारण यसलाई स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ ।भारतका आयुर्बेद एक्सपर्ट अबरार मल्तानीका अनुसार किशमिसमा गुलियो मात्रा बढि हुने भएकाले रातभरी यसलाई भिजाएर राख्दा यसको गुलियो पन कम हुने र पौष्टिक तत्वमा वृद्धि हुन्छ । यसरी बनाउँहोस् किशमिशको पान...
के तपाईं मुसा,लामखुट्टे,झिङ्गा,साङ्लाबाट आजित हुनुहुन्छ? यसो गर्नुहोस्
यदि तपाईं पनि घरमा आउने मुसा, लामखुट्टे, झिङ्गा, साङ्लाले आजित हुनुहुन्छ र यसलाई भगाउने कुनै तरिका थाहा छैन भने यहाँ दिइएका घरेलु तरिका अपनाउनुहोस् । १. घरेलु तरिकाले भगाउनुहोस्- झिंगा, लामखुट्टे… धेरैजसो महिला घरमा फोहोर र रोग फैलाउने किरालगायतका अन्य जीवका विषयमा चिन्तित हुन्छन् र चाहेर पनि यसलाई घरमा आउन बाट रोक्न सक्दैनन् । तर यसलाई बे...
घरमा उब्रियको बासी भात यसरी खानुहोस् ! स्वास्थ्यका लागि लाभदायी छ
तपाईको घरमा भात उब्रिय के गर्नुहुन्छ ? गाउ घर तिर भए गाई बस्तु शहर तिर भए कुकुर वा कसै कसैले त आँफै भुटेर खाने गरेको पनि पाईन्छ । कतिले त बासी भात स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वा बासी भात खानु हुन्न भनी मिल्काउने गरेको धेरै देखेका छौ । अबका दिनमा जब तपाईको घरमा साँझ वा बिहान बचेको भासीभात फ्याँक्ने भूल नगर्नुस् । तपाईलाई पनि थाहा नहुन सक्छ, त्यही भ...
डा. केसीको अवस्था नाजुक, रक्तचापमा व्यापक गडबडी
काठमाडौं,श्रावण १ । १८ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक बन्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सहरुले बताएका छन् । विगत २४ घन्टामा डा. गोविन्द केसीको मुटुको चाल, श्वासप्रश्वासको गति र रक्तचापमा व्यापक गडबडी देखिएको छ । रगतमा अक्सिजनको मात्रा निरन्तर कम रहेकाले डा. केसीलाई लगातार अक्सिजन दिइएको छ । बिहानीपख ...
स्याउ खानुका फाइदाहरु यस्ता छन् :बुझनुहोस्
एजेन्सी । दिनको एउटा स्याउ खाँदा डाक्टरकहाँ धाउनुपर्दैन भन्ने पुरानो आहान नै छ । वास्तवमा स्याउ एकदमै स्वस्थकर खानेकुरा हो । स्याउमा एन्टीअक्सिडेन्ट, फाइबर र फ्लेभोनोइड प्रशस्त पाइनछन् । यसमा भएको फाइटोन्युट्रिएन्टले धेरैथरी फाइदा गर्छ । स्याउमा धेरै पानी र फाइबर हुन्छ । त्यसैले यसलाई पूर्ण आहार बनाउँछ । अझ यसमा भएका प्राकृतिक कम्पाउन्डले तौ...
मकैको जुँगा पनि फाईदाजनक रहेछ ! क्यान्सर पत्थरी मधुमेह नियन्त्रण गर्छ
एजेन्सी । मकै संसारमा सबै भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा लगाईने तथा सबै भन्दा धेरै खपत हुने बालीमा पर्दछ । बहु उपयोगि, यो बाली बाट, बिभिन्न परिकार, तेल, इन्धन, चीनी, रक्सी आदि बनाउने गरिन्छ । धेरै मानिसहरुले उसिनिएका मकै वा पोलिएका मकै खान मन पराउंछन् । यस किसिमका मकै खाएमा स्वास्थ्यका लागि धेरे फाइदा हुन्छ । मकैकाे त्यसै खेर फालिने मकैको जुँगा पनि ए...
वर्षायाममा माछा खानुहुदैन किन्? बुझनुहोस
एजेन्सी । माछा खान मनपराउने अधिकांशले यहि सोँच्छन् कि यो अति स्वस्थवर्द्धक खानेकुरा हो। हुन त, माछाको मासुमा ओमेगा(३ फ्याटी एसिड पाइन्छ, जुन मुटु र मस्तिष्कको स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुने खोजबाट पत्ता लागिसकेको छ। माछामा प्रशस्तै पाइने प्रोटिन र भिटामिन(डी ले हाम्रो मांशपेसीको वृद्धि र विकासमा मद्दत गर्दछ।वर्षायाममा माछाको सेवनले स्वास्थ्यम...
शरीरमा पानीको कमी छ कि? कसरी बुझने जानिराखौं
हामीलाई शरीरमा पानीको कमी भयो भने विभिन्न समस्याहरु देखा पर्न थाल्छ तर हामीलाई के भएर यस्ता समस्या देखिएका छन् भन्ने थाहा हुँदैन । यहाँ हामी शरीरमा पानीको कमि हुँदा देखिने लक्षणबारे जानकारी दिदै छौं- टाउको साह्रो गरी दुख्छ : टाउको दुखिरहेको छ, तर के कारणले दुखेको हो भन्ने थाहा हुँदैन त्यसका कारण शरीरमा पानी कम भएर हो । त्यसरी टाउको गह्रौँ भ...
यस्ता २० टिप्सहरु जसले तपाईको जिन्दगिमा खुसीको बहार ल्याउनेछ
हामी जे गर्छौं, सबैको मूल ध्येय हो सन्तुष्टि एवं खुसी । जो कोहि, चाहन्छन् आफ्नो जीवन खुसीसाथ बितोस् । खुसी खोज्न अन्त जानुपर्दैन । हामीभित्रै छ । तर, पनि कति दुर्लभ ! खुसीको अर्थ पनि व्यक्ति पिच्छे फरक फरक हुन सक्छ । कसैले केहि कुरामा खुसी भेट्छन भने कसैले केहि । मानिसको रुचीअनुसार खुसी पनि फरक फरक हुन सक्छ । तर, सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा म...
सपना सम्बन्धी १४ रोचक तथ्यहरु ? जानिराखौं
हामी सपना किन देख्छौं र सपनाको के अर्थ लाग्छ भन्ने बारेमा हामी जिज्ञासु रहन्छौं । हाम्रो दिमाग सुतेपछि कसरी प्रोजेक्टर बन्न पुग्छ अनि आँखा कसरी स्क्रिन बन्न पुग्छ जसमा छविहरू नाच्छन् भन्ने कुरा रमाइलो छ । आउनुस्, जानौं सपना सम्बन्धी केही तथ्य : १. बच्चाहरू तीन—चार वर्षको नहुँदासम्म आफ्नो बारेमा सपना देख्दैनन् । २. निद्रामा घुर्ने मान्छेले ...
खादा कति पयलाई करेलाको तितो स्वाद मन पर्दैन त कति पयलाई अत्याधिक मन पर्छ । स्वादका हिसावले मन पर्नु अथवा नपर्नु भन्दा स्वास्थ्यका हिसावले कस्ता खाले मानिसले करेलाको सेवन गर्नु हुन्छ भनेर सामान्य जानकारी राख्नु अत्यावस्यक छ । करेला एन्टिअक्सिडेन्ट र भिटामिनले भरिपूर्ण हुन्छ । करेलामा भिटामिन ए, भिटामिन बि, भिटामिन सि, फाइबर, क्याल्सियम, पोटासियम,...
वाइनको थोरै सेवन मधुमेहका लागि फाइदाजनक
बीबीसी जुन व्यक्तिले हप्तामा तीन देखि चार पटकसम्म मदिरा सेवन गर्छन् उनीहरुलाई कहिल्यै मदिरा सेवन नगर्ने व्यक्तिहरुलाई भन्दा टाईप २ मधुमेह रोग लाग्ने सम्भावना कम रहेको डेनमार्कका अनुसन्धानकर्ताहरुले जनाएका छन्। रगतमा चिनीको मात्राको व्यवस्थापन गर्ने सम्भावनाका कारण खासगरि वाइनको सेवन फाइदाजनक हुनसक्ने डायवेटोलोजियामा प्रकाशित उक्त अध्ययनमा ...
वेस्टर्न मेगा कलेजमा रक्तदान
बुटवल,असार १ वेस्टर्न मेगा कलेज बुटवल रुपन्देहीले कलेज प्रागणमा दोस्रो रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । विष्णु न्यौपानेको सञ्चालनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कलेजका अध्यक्ष मेघराज पन्थ, प्रचार्य श्रीप्रसाद भट्टराई लगायतका शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरुको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा आरम्भ ग्रु...
८ रोगको उपचारमा घिउको प्रयोग
जेठ ३० २०७५ ekhabarnepal
१. कपाल दुखेमा गाईको घ्यू पाँच चम्चा कराईमा तताउनु र सात गेडा मरिच डडाउनु र छानेर राख्नु । टाउको दुखेको बेलामा घ्यू कंचटमा दल्नु ठीक हुन्छ । २. जाडोले कामज्वरो आएमा एक डाडु घ्यूमा एक चम्चा मरिचको धूलो डडाएर कपुर २–४ पुरिया हालेर शरीर भरी मालिस गरेमा शरीर तातेर आउँछ र ठीक हुन्छ । ३. आँखा धमिलो र फूलोमा गाइको घ्यूमा नीमको फूलको गाजल बना...
होशियार ! म:म बाट पनि साइड इफेक्ट हुन्छ
के तपाइँ म:म खानु हुन्छ यदि खानु हुन्छ भने आजैबाट सचेत हुनु होस् । म:म बनाउन मैदाको प्रयोग गरिन्छ । मैदाबाट बनेको म:म दैनिक खानु शरीरका लागि खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । हिजोआज हरेक गाउँदेखि सहरका गल्लीमा सहजै उपलब्ध हुने मम स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । मम होस् वा अन्य मैदाबाट बनेको अन्य खानेकुराको साइड इफेक्ट हुन्छ । ...
रातिमा मोबाईल चलाउदा यस्ता रोगहरु लाग्न सक्छ : सर्तक रहनुहोस्
एजेन्सी। अाजभाेलीका मानिसहरू माेवाइलबिना एकछिन पनि बस्न सक्दैनन् । कतिपय यस्ता मानिसहरु हुन्छन् जो सुत्नुभन्दा अघि अध्यारोमा वा रातको समयमा स्मार्टफोनमार्फत काम गर्ने गर्छन् । जसबाट आँखा र मस्तिष्कमा नराम्रो असर पर्ने गर्दछ । अनुसन्धानले अध्यारोमा स्मार्टफोन चलाउनु खतराजनक हुने बताएका छन् ।रातिमा सुत्नुअघि मोबाइल चलाएमा आँखाको रेटिनामा गम्भीर...
के तपाई दिनहुं कोक पिउनुहुन्छ ? यो सेवन गरेको १ घण्टा भित्र शरीरमा के-के हुन्छ ,थाहा पाउनुहोस्
सफ्ट ड्रिंक्ससँग जोडिएको एउटा समाचारले विश्वमा खलबली मच्याएको छ । ब्रिटेनका पूर्व फार्मास्टिक नीरज नाइकले आफ्नो एक ब्लगमा कोल्ड ड्रिंक्स खाएपछि शरीरको भित्र हुने प्रभावका बारेमा केही कुरा बाहिर ल्याएका छन् । उनले यस ब्लगमा कोकाकोला खाएको १ घण्डापछि शरीरमा के–के हुन्छ भन्ने कुरा बाहिर ल्याएका छन् ।डेली मेलका अनुसार नाइकले एक ग्राफिकका माध्यमबाट ब...
अछाममा पहिलोपटक आन्द्राको सफल शल्यक्रिया
अछाम– अछामको बयालपाटा अस्पतालमा पहिलोपटक आन्द्राको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । तीन दिनदेखि पेट दुखेर बिरामी भई अस्पताल पुगेका साँफेबगर–१३ बाब्लाका ५२ वर्षीय अम्बरे विष्टको आन्द्रामा परेको प्वालको शल्यक्रिया गरिएको हो । आन्द्रामा समस्या भएका उनले दुई घण्टाको सफल शल्यक्रियापछि खुशी व्यक्त गर्दै भने, “टाढा जानलाई पैसा थिएन, बयालपाटामै आफ्नो उपचा...
सुर्तीकै कारण हरेक वर्ष ३० लाख मानिसको मुटु रोगबाट निधन
काठमाडौँ,जेष्ठ १७ धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईँदै छ । हरेक वर्ष मे ३१ का दिन विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिएको छ । दिवसको अवसरमा यस वर्षको नारा धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थले मुटुलाई नोक्सान गर्ने भएकाले ‘सुर्तीजन्य पदार्थ होइन स्वास्थ्य रोजौँ’ भन्ने तय गरिएको छ । धुम्रपान तथा सुर्त...
पाँच वर्षभित्रै सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल
काठमाडौँ,जेष्ठ ७ पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलेसंघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिन्। एक सयभन्दा बढी बिरामीकक्षका ठूला अस्पतालमा ज्य...
तिलोत्तमा, जेठ १ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ८ प्रदीपनगर स्थित कुँवरवर्ती इंलिस बोर्डिङ स्कूललाई प्लाष्टिकमुक्त घोषणा गरिएको छ । मंगलबार जुनियर रेडक्रस सर्कलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विद्यालयका प्राचार्य दीपक खनालले स्कूललाई प्लाष्टिकमुक्त घोषणा गर्नुभएको हो । तिलोत्तमा नगरपालिकाले सुरु गरेको अभियानलाई साथ दिँदै विद्यालयलाई प्...
वैशाख ३०, दही दुधलाई फर्मेन्टेसन गरी बनाइन्छ । यो क्रियालाई दूध सुरक्षित राख्ने एक विधिको रुपमा पनि लिन सकिनछ । किनकि दहीलाई दिनसम्म चिसोमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भने दूधलाई यसरी राख्दा ब्रिग्रिन्छ।दही बनाउने समयमा दूधमा प्रयोग गरिने जोडनको माध्यमबाट ल्याक्टोब्यासिलस जीवाणु सक्रिय भई दूधमा रहेको ल्याक्टोज चिनीलाई ल्याक्टिक एसिडमा परिणत ग...
विश्वकै दुर्लभ घटना ! जलवायु परिवर्तनको कारणले हिमाली क्षेत्रमा कालाज्वरो
बैशाख २६ २०७५ ekhabarnepal
डा. शेरबहादुर पुन - हालै गरेको एक अनुसन्धानको नतिजाले नेपालमा कालाज्वरो हिमालमा (डोल्पा) पुगेको प्रमाणित भएको छ। यो आफैँमा अति दुर्लभ घटना हो। सन् २०११ मा यो पहिलोपल्ट कालाज्वरो तराईबाट पहाडतिर फैलिँदै गएको अनुसन्धान लेख प्रकाशित गरेको थिएँ । धेरैले विश्वास गरेका थिएनन् । तर त्यसयता नेपालमा प्रकाशित अरु बिभिन्न अनुसन्धानहरुले पनि कालाज्वरो ...
शंख बजाउँदा स्वास्थ्यलाई फाइदै फाइदा
हिन्दू धर्ममा शंखको महत्वपूर्ण स्थान छ। शंख राख्दा नकारात्मक उर्जा आउँदैंन र नराम्रो शक्ति टाढा भाग्छ । आयुर्वेदमा शंख निकै लाभदायी मानिन्छ । शंख बजाउनाले मूत्राशय, पेटको तल्लो भाग, छाति र गर्धनको मांसपेशीको स्वतः अभ्यास हुन्छ । शंख बजाउनाका फाइदाहरु १. फोक्सोका लागि फाइदाजनक शंख बजाउँदा हाम्रो फोक्सोको राम्रो व्यायाम हुन्छ । यदि स्वास सम्ब...
कोलेस्टेरोल घटाउने ६ खाना
एजेन्सी कोलेस्टेरोल मुटु रोगको एउटा कारण हो। नियमित व्यायाम गरेपनि खानपान स्वस्थ छैन भने शरीरमा खराब कोलेस्टेरोलको मात्रा बढ्छ। यसलाई नियन्त्रित गर्न खानपानमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। केही खानाले कोलेस्टेरोललाई नियन्त्रित राख्न सहयोग गर्छ र त्यस्ता खानाको साइडइफेक्ट पनि हुँदैंन। १. ओखर ओखरमा ओमेगा ३ र मोनो स्याचुरेटेड फ्याटी एसिड ...
लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट
बुटवल,बैशाख २२ लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका लागि रोटरी क्लब अफ बुटवलले अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट हस्तान्तरण गरेको छ। अस्पताल परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा रोटरी डिस्ट्रिक ३२९२ का गभर्नर सञ्जय गिरीले अस्पताल प्रशासनलाई प्लान्ट हस्तान्तरण गरेका हुन्। रोटरी क्लब अफ बुटवल २१ लाख, रोटरी क्लब जयपुर डिस्ट्रिक ३२३० भारतको १० लाख र रोटरी फाउन्डेसनको १९...
सावधान ! नीलो प्रकाशले क्यान्सर गराउँछ
एजेन्सी। आजकल एलईडी स्क्रीन वा बल्बबाट निस्कने नीलो प्रकाशले क्यान्सरको खतरा बढाइरहेको छ । ब्रिटेन विश्वविद्यालय र बार्सिलोना इन्स्टिच्युट फर ग्लोबल हेल्थको अनुसन्धानअनुसार, एलईडी बल्बको प्रकाशले स्तन र प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा डेढ गुणा बढाउँछ । अनुसन्धानले एलईडी लाइट्सको नीलो प्रकाशले शरीरलाई प्रभावित गर्ने र निद्राको प्याटर्न बिगार्...
मानसिक रोगीलाई परामर्शबाटै निको पार्न सकिन्छ - मनोचिकित्सक
बैशाख १८ २०७५ ekhabarnepal
रासस। मानसिक रोग परामर्शबाट नै निको पार्न सकिने मनोचिकित्सकले बताएका छन् । मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्रले मानसिक रोगको अवस्था, रोकथाम र उपचारका विषयमा पत्रकारसँग गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा केन्द्रका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा कपिलदेव उपाध्यायले मानसिक रोगीलाई परामर्शबाटै निको पार्न सकिने बताउनुभएको हो । “मानसिक रोगीले औषध...
यस्ताछन् मेवा खानुको फाइदाहरु
यस्तो छ मेवा खानुको फाइदा । के तपाइँ ले दैनिक मेवा खानु भयको छ । जन्नुहोस कुन रोग बाट टाढा हुनुहुँछ । अचुक फाइदाहरु : 1.पाचन प्रणालि बलियो बनाउछ । 2.कोलेस्ट्रोल घटाउछ । 3.रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउछ । 4.आखा बिग्रिन दिदैन । 5.वजन घटाउछ । 6.हड्डी बलियो बनाउछ । 7.पिडा कम गरछ । 8.क्यान्सर बाट बचाउछ । 9.स्क्रिनमा चाउरिपन...
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्दैछ सातै प्रदेशका मन्त्रीसँग अन्तक्र्रिया
काठमाडौँ चैत २३, रासस । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आव २०७५÷७६ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा बारे सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्रीसँग अन्तक्र्रिया गर्ने भएको छ ।स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रालयले यही चैत २६ र २७ गते काठमाडौँमा अन्तक्रियाका लागि सातै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, सामाजिक विकास सचिव, सो म...
यस्ता आठ काम गर्नुहोस रोग लाग्दैन
रोग किन लाग्छ ? यसको सोझो जवाफ हो, हाम्रो आफ्नै कमजोरीले । अर्थात खानपान, दिनचर्या आदिमा गरिने गडबडी । हामी दिनदिनै रोगी हुँदैछौं । रोगी कसको कारणले हुँदैछौ ? जवाफ हो, आफ्नै कारणले । खासगरी हाम्रो यस्ता आनीबानी, जसले रोगी बनाउँछ । बाह्य खासगरी वातवरणिय कारणले पनि हामीलाई कमजोर बनाउँछ । कतिपय अवस्थामा बंशानुगत कारण हामी रोगी बन्छौं । तर, त्यो ...
सरकारले खुलाउदैछ नि:शुल्क औषधी खरिद प्रक्रिया
बीबीसी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमवार नयाँ महानिर्देशक नियुक्ति गरेपछि झन्डै २ महिनादेखि जिल्ला जिल्लामा नि:शुल्क औषधी खरिद गर्न रोकिएको प्रक्रिया अब खुल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। बजेट निकासा गर्ने अख्तियारी पाएको महानिर्देशक नभएको जस्ता कारणले हाल अधिकांश जिल्लाका स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधी अभाव हुन थालिसकेको छ। ...
'एपेन्डिक्स'ले ज्यान लिन सक्छ : सजग बनौ ,यस्ता छन् कारण र लक्षण
एजेन्सी : कोही एपेन्डिसाइटिसलाई राम्रो व्याक्टेरियाहरुको घर भन्छन्, भने कोही यसलाई काम नलाने अंगको रुपमा लिन्छन् । एपेन्डिसाइटिस ठूलो आन्द्राको पुछारमा हुन्छ । हातको औला जस्तो देखिने चार इञ्च लामो यो अंगमा जब अवरोध हुन्छ, त्यतिबेला एपेन्डिक्स हुन्छ । एपेन्डिक्स एक प्रकारको मेडिकल इर्मजेन्सी हो । एपेन्डिक्स भएको २४ घण्टा देखि ४८ घण्टाभित्रमा शल...
ट्रस्टद्धारा विद्यालयमा शौचालय निर्माण
बुटवल चैत १३ । पश्चिम नेपाल विकास टष्टले बुटवलको वुद्धनगर स्थीत सहीद स्मृति विद्यालयमा शौचालय निर्माण गरेको छ । यहा अध्यानरत बालवालिकाहरु अधिकांस सुकुम्वासी तथा विपन्न वर्गका रहेका छन । वालवालिका लाई विद्यालयमा शौचालयको समस्या भएको पाइएपछि टस्टले शौचालय बनाइदिएको हो । दुइ कोठे महिलामैत्री शौचालय एक समारोहका वीच हस्तान्तरण गरिएको छ । ट्रष्टल...
के तपाई स्मरणशक्ति बढाउन चाहानुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
आजकलको व्यस्त जीवनशैलीमा दिमागलाई अत्यधिक भार पर्छ । यसैले गर्दा धेरै मानिसको दिमाग कमजोर हुन थाल्छ । दिमाग कमजोर भएपछि स्मरणशक्ति पनि गुम्ने नै भयो । तपाईंमा यो समस्या छ भने यहाँ बताइएका उपाय अपनाउनुस् । भिजाइएको बदाम प्रत्येक रात १० वटा बदाम पानीमा भिजाएर राख्नुस् । बिहान उठेर त्यसको बोक्रा निकालेर मसिनो पेस्ट बनाउनुस् । अनि त्यसमा मह हाले...
डाइनेटिक्स सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं, फागुन २८ डाइनेटिक्स इन्टरनेशनलको सहकार्यमा साइन्ट्रोलोजी भोलेन्टिय नेपालको आयोजनामा डाइनेटिक्स सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । मानसिक स्वास्थ्यको आधुनिक विज्ञान भनेर चिनिने डाइनेटिक्सको गोष्ठी नेपालमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको हो । डाइनेटिक्समा रुची राख्ने १०५ जनाको सहभागिता रहेको यो गोष्ठी दक्षिण एशियाकै ठुलो र विश्वका ...
वायु प्रदूषणबाट नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३५ हजारको मृत्यु
फागुन २६ २०७४ .
रासस विराटनगर, फागुन २६ | वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘वायू प्रदूषण नियन्त्रण’ गोष्ठीमा विभिन्न कारणले हुने वायु प्रदूषणका कारण अनेकौँ रोग निम्तिने र त्यो मानव मृत्युको प्रमुख कारकका रुपमा देखिएको जानकारी दिइएको छ...
डाइबिटिज पाँच प्रकारका, उपचारविधि पनि फरक हुने
फागुन २२ २०७४ बीबीसी
बुटवल फागुन २२ बीबीसी हालसम्म जम्मा दुई प्रकारको मात्र हुने भनी उपचार भइरहेको डाइबिटिज रोगको विभिन्न पाँच प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिने स्वीडेन र फिनल्याण्डका वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। गत शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको त्यस्तो अनुसन्धान परिणामले उक्त रोगको सही निदान गर्न चिकित्सकहरूलाई सघाउ पुग्ने ठानिएको छ। साथै डाइबिटिजका कारण उत्पन्न हुन...
डा.प्रकाशराज रेग्मी, पछिल्लो समय नेपालीहरुमा मुटु, क्यान्सर र मधुमेह लगायत विभिन्न किसिमका रोगहरुको संक्रमण बढ्दै गएको छ । मानिसमा लाग्न सक्ने विभिन्न रोगहरुबाट बच्न शरीर मात्रै स्वास्थ्य भएर नपुग्ने बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर रेग्मीले बताए । उनले भने,‘ शरीरलाई पूर्ण रुपमा स्वास्थ्य मान्नको लागि हाम्रो शरीर, दिमाग र मन पनि स्वास्थ्य हुनु...
मोबाइलबाट निस्कने विकीरण स्वास्थ्यका लागि खतरा
फागुन १७ २०७४ बीबीसी
बीबीसी काठमाडौँ, फाल्गुन १७ मोबाइल फोनबाट निस्कने रेडियोधर्मीहरुले मानिसलाई कत्तिको असर पार्ला ? फोनबाट निस्कने यस्ता विकीरणहरुले ट्युमर, क्यान्सरजस्ता रोगहरु लाग्ने खतरा कतिको हुन्छ ? यस्ता विकीरणहरुबाट आफू कसरी सुरक्षित रहने । यो सवालको खोज वैज्ञानिकहरुले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छन् । नतिजा हालसम्म नआए पनि वैज्ञानिकहरुको अनुसन्धा...
देब्रे घुँडाको अपरेशन गर्न लगेका डाक्टरले दाहिने चिरे
फागुन १२ २०७४ .
काठमाडौं,फागुन १२ । नर्भिक अन्तराष्ट्रिय अस्पतालले उपचारका क्रममा गम्भीर गल्ती गरेको भेटिएको छ । अस्पतालका डाक्टरले देब्रो खुट्टा अपरेशन गर्न भर्ना भएकी विन्दु पौडेलको दाहिने खुट्टाको घुँडाको अपरेशन गरेको हो । चितवनकी ३८ वर्षीया पौडेल लिगामेन्ट च्यातिएका कारण उपचार गर्न नर्भिक आएकी थिइन् । चितवनमा देखाउँदा अपरेशन गर्नुपर्छ भनेरपछि परिव...
गाली गर्दाको फाईदा - समस्याको सामना गर्ने क्षमता बढ्छ
फागुन १० २०७४ ekhabarnepal
कसैलाई गाली गर्दा वा कसैको गाली खाँदा कसलाई पो मज्जा लाग्ला र ? कसैलाई गाली गर्नु वा आफैले गाली खानु राम्रो कुरा होइन । यसले मानिसको भावनामा चोट पुग्दछ । तर एउटा अध्ययनले भने गालीले मानिसको क्षमता बढाउने र कुनै समस्याको सामना गर्ने हिम्मतमा वृद्धि गर्ने तथ्य पत्ता लगाएको छ । यदि तपाइँले कसैलाई सार्वजनिक स्थानमा गालीगलौज गर्नुभयो भने तप...
फोहोर गर्नेलाई अब डण्डा हान्नुपर्छ : लालबाबु
फागुन ६ २०७४ .
काठमाडौं,फागुन ६ जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले फोहोर गर्नेलाई अब ‘अन द स्पट’ कारबाही गरेर दण्डित गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले वातावरणलाई स्वच्छ राख्नको लागि निर्दयी कदम चाल्नुपर्ने भएकोले आफू त्यसको लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए । आईतबार राजधानीमा वाग्मती बचाउ अभियान नेपाल र राधिका ट्रष्ट नेपालले संयुक्त रुपमा नवनियुक्त...
स्वास्थ्य बीमाप्रति जागरुक बने स्थानीयवासी
माघ २४ २०७४ ekhabarnepal
भोजपुर माघ २४, स्वास्थ्य बीमाप्रति भोजपुरका स्थानीयवासी हौसिएका छन् । छोटो समयमा नै दुई हजारभन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गराइसकेको बीमा बोर्डका जिल्ला संयोजक नवराज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । भोजपुरका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा हालसम्म दुई हजारभन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म पौवादुम्म...